GNOME CIRCLE: Ngwa na ulo akwukwo ulo akwukwo maka GNOME | Site na Linux
Taa, dị ka ụzọ isi nọgide na-enye onyinye na mgbasa na ịhịa aka n'ahụ nke imerime oru bara uru nke Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux dị, anyị ga-ekwu maka otu akpọrọ «GNOME okirikiri».
Kedu, nke bụ isi, bụ ọrụ na-atọ ụtọ ma bara uru nke emere na maka Obodo "GNOME", iji gbasaa gị ebumnuche nke ngwa na ọba akwụkwọ, yana nkeonwe na nke atọ.
Ihe ngwanrọ kachasị mma na ngwa ọdịnala mepere emepe maka gburugburu ọkachamara
Maka ndị, dị ka ha na-achọkarị ịchọpụta ma gbasaa ihe ọmụma ha na ọtụtụ free na-emeghe ngwa oru ngo, bara uru ma dịịrị onye ọ bụla, anyị na-akwado akwụkwọ na-esonụ gara aga:
"Ojiji nke sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe, dị ka GNU / Linux, ya na nnukwu ya, na-eto eto, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ngwa na n'efu, n'efu ma ọ bụ na ọ bụghị, na-eme ka nke ọ bụla Distros na Apps dị mma, dị mfe ma dị irè Ngwọta IT maka ọrụ onwe onye na nke ọkachamara, ya bụ, ọrụ n'ụlọ na ọfịs." Ihe ngwanrọ kachasị mma na ngwa ọdịnala iji rụọ ọrụ na Linux
Ihe ngwanrọ kachasị mma na ngwa ọdịnala iji rụọ ọrụ na Linux
1 GNOME CIRCLE: Expbawanye GNOME Ecosystem
1.1 Kedu ihe bụ GNOME CIRCLE?
1.2 Kedu uru nke GNOME CIRCLE maka ndị mmepe GNOME?
1.3 Kedu ihe ị chọrọ dị ka onye nrụpụta iji tinye maka GNOME CIRCLE?
1.4 Ngwa etinyere n'ime GNOME CIRCLE ruo ugbu a
GNOME CIRCLE: Expbawanye GNOME Ecosystem
Kedu ihe bụ GNOME CIRCLE?
Dị ka ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke a Ihe oru ngo meputara na nke GNOME Community, a kọwara ya dị ka:
"Ihe oru ngo nke na-acho ime ka mmepe na uto nke ngwa na ulo akwukwo di iche iche iji gbasaa GNOME Desktop Environment ecosystem. N'ihi ya, GNOME CIRCLE na-anọchite anya ezigbo ngwanrọ mepụtara ma dị maka ikpo okwu GNOME. Ọbụghị naanị ngwa na ọba akwụkwọ kachasị mma maka GNOME, kamakwa na-achọ ịkwado ndị mmepe onwe ha na-eji teknụzụ GNOME."
Kedu uru nke GNOME CIRCLE maka ndị mmepe GNOME?
Ndị nlekọta nke ọrụ a kwuru na:
"Ndị mmepe ahụ na-eji nyiwe GNOME nwere ike ịrịọ ka etinye ọrụ ha na GNOME Circle."
Ya mere, ọ bụrụ na a kwadoro ọrụ gị, tozuru oke inweta ụfọdụ uru, nke a pụrụ ịkpọ ndị na-esonụ:
Nkwalite na mkpọsa.
Nhọrọ itinye aka na otu Circle's GitLab.
Ikike ịbụ onye otu GNOME Foundation.
Na nke ikpeazụ, a na-emekwu uru dị ka:
Kpee aka na ntuli aka nke ndi isi oche na nhoputa ndi mmadu.
Iji gwaa onye obula maka ntuli aka nke ndi isi oche.
Jiri email utu aha «@gnome.org», a blog kwadoro na «https://blogs.gnome.org», na ebe nrụọrụ weebụ dị na «https://people.gnome.org».
Soro na webụ GNOME mbara ala.
Nata nkwado na nkwụghachi ụgwọ maka njem, nzukọ na hackfests.
Nwee akaụntụ na ọrụ ahụ «GNOME Cloud» na na «meet.gnome.org».
Tinye maka ego E-Rate na GANDI: ngalaba na ndị na-eweta Bochum.
Kedu ihe ị chọrọ dị ka onye nrụpụta iji tinye maka GNOME CIRCLE?
Ndị nlekọta ọrụ «GNOME CIRCLE» kọwaa na, iji tozuo maka ọrụ ahụ, ndị mmepe ga-amakarị:
Nwee ọkwa dị mma n’ozuzu ha na mmepe ha.
Jiri ikikere OSI kwadoro.
Enweghi nkwekọrịta ikike onye ọ bụla (CLA).
Banyere ngwa karịsịa, Gwa ha ka ha mee ihe ndị a:
Jiri usoro ikpo okwu GNOME, gụnyere GTK.
Ha dị ka arụnyere dị ka Flatpak.
Ha na-ejikọta nke ọma na Desktọpụ GNOME, gụnyere nke nwere akara ngosi ngwa wee bịa na nkọwapụta na nseta ihuenyo na-egosi na ngwa ngwanrọ ahụ.
Nwee usoro eji arụ ọrụ nke ọma nke na-agbaso mgbakọ GNOME.
Banyere ọba akwụkwọ karịsịa, Gwa ha ka ha mee ihe ndị a:
Gbasaa atụmatụ atụmatụ GNOME ma lekwasị anya na ngwa ndị ị na-eji eme ihe.
Soro ntuziaka koodu GNOME.
Enwere ike iji ha ma ọ dịkarịa ala otu ọrụ ma ọ bụ ngwa ọzọ.
Biko nye ụfọdụ akwụkwọ (ọbụlagodi akwụkwọ nrụtụ aka maka API).
Ngwa etinyere n'ime GNOME CIRCLE ruo ugbu a
Ruo ugbu a, a pụrụ ịgụta ha 29 ngwa na 4 ọba akwụkwọ, na weebụsaịtị nke «GNOME CIRCLE», nke nwere ike ime ka ihe ndị na-esonụ pụta ìhè:
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «GNOME CIRCLE», ihe na-akpali ma bara uru oru ngo kere na maka Obodo "GNOME", iji gbasaa gị ebumnuche nke ngwa na ọba akwụkwọ, na nke onwe na nke atọ; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » GNOME CIRCLE: Ngwa na ulo akwukwo ulo akwukwo maka GNOME